Kedu ihe kpatara ịga leta Moldova n'oge Coronavirus?
Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Kedu ihe kpatara ịga leta Moldova n'oge Coronavirus?
Naanị otu okwu nke COVID-19 bụ ọnọdụ dị ugbu a maka Moldova, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma ịga leta.
Moldova, mba dị n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe na mba Soviet mbụ, nwere ala dịgasị iche iche gụnyere oke ọhịa, ugwu ugwu na ubi vaịn. Mpaghara mmanya ya gụnyere Nistreana, nke a na-akpọ ahịhịa uhie, na Codru, bụ́ ebe obibi nke ụfọdụ ụlọ okpuru ala ndị kasị ibu n’ụwa. Isi obodo Chișinău nwere ụdị ụlọ Soviet na National Museum of History, na-egosipụta nka na nchịkọta agbụrụ nke gosipụtara njikọ ọdịnala na Romania agbata obi.
The Republic nke Moldova na-aghọwanye ihe na-akpali akpali njem nleta na etiti nke Europe. Amara maka akụkọ ntolite ya bara ụba, ọdịnala na-adịte aka maka ile ọbịa nke gosipụtara site na mmanya na nri, Moldova dị mpako ịkpọsa mwepụta nke atọ Wine ụzọ gasị dị ka ndị zuru okè ọnụ ụzọ ámá na ịgagharị a kwụsịrị amia ụzọ ebe.
Wine uteszọ nke Moldova enweela ihe ịga nke ọma ịgbaso ITER VITIS ROUTE, European Cultural Route of the Vine and Wine 'Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne', nke European Federation Iter Vitis kwalitere na 'Czọ Omenala nke Council nke Europe'na 2009.' Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne 'ebumnuche bụ ichebe mmanya dị iche iche nke mmanya na igosipụta ịpụ iche ya na ụwa zuru ụwa ọnụ. Moldova si Association nke njem njem njem (NA-EBU) dị mpako ịnọchite anya ya Moldova na ebumnuche a na ịzụlite ezigbo mmanya na mmanya na ebe ị ga-aga mmanya. Wine uteszọ nke Moldova emeghewo mmanya 7 pụrụ iche na ihe nkiri gastronomy, ncheta a na-echefu echefu na 30 wineries, ọnụ ụzọ okpuru ulo na ime ụlọ na-atọ ụtọ, ịnweta mmanya mmanya 15, na ọtụtụ ihe omumu ọdịnala.
Wine uteszọ nke Moldova na-agafe na mpaghara atọ enyere akara ngosi ala. Etiti Ruzọ Mmanya Codru PGIna-anọchite ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke wineries, na ebe a ị nwere ike ịchọta ndị ọcha, acha ọbara ọbara, na mmanya na-egbu maramara. The Trajan's Wall PGI Wine Nsoro sitere na isi obodo, Chisinau, na South-West. Amara maka ụdị ya dị iche iche na-acha uhie uhie, ọ na-agafere Moldova si kwurula mpaghara Gagauzia nke nwere ikike Turkish na gastronomy dị iche iche. Stefan Ukwu PGI Wine Route, nke na-amalite na Chisinau ma na-aga n'ihu na South-East na-ewe gị njem site na mmanya dị egwu, ihe ncheta akụkọ ihe mere eme na ebe ọdịda anyanwụ.
Lonely Planet kwuru, sị:
“Mmanya uteszọ nke Moldova bụ a na netwọk nke atọ ụzọ gasị, nke iru n'ime mba akụkọ ihe mere eme mmanya mpaghara nke Codru, Valul lui Traian na Stefan Voda. Zọ - malite n'isi obodo, Chisinau - ma jee ozi dị ka corridors ọdịbendị na nke njem nke na-egosipụta ememme, ihe omume, na isi ihe metụtara mmasị dị ka B & Bs, ebe ewusiri ike, ebe obibi ndị mọnk, ihe ndị e kere eke, na saịtị ndị mgbe ochie. Maka ndị njem, netwọkụ a na-enye njegharị doro anya mgbe ha na-ekpughe izi ezi na-enweghị atụ na echiche gọọmet na-atụghị anya ya nke ihe karịrị afọ 5000 nke mmanya na-eme mmanya na ọkwa dị mkpa nke mmanya. ”
E yigharịrị Forum de l'Investissement Hôtelier Africain
Diane Waldron weputara ozo na ICCA UK & Ireland